Pokhara Sub-Metropolitan City နီပေါနိုင်ငံရှိအဆင့်မြင့်အလယ်တန်းကျောင်းသားများအကြားတွင်လက်မထပ်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ - Your Brain On Porn
လိင်ကျန်းမာရေး။ 2018 အောက်တိုဘာ2။ Doi: 10.1071 / SH17210 ။
Adhikari N ကို, Adhikari S က, Sulemane ni.
နောက်ခံသမိုင်း: လူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအဓိကပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြဿနာများတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဆယ်ကျော်သက်ကလူထိုကဲ့သို့သောတစ်ခုအစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာလိင်ကျင့်သုံးမျိုးစုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ရှိခြင်း, အရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေး၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာနေချိန်တွင်လိင်ဆက်ဆံနှင့်အကာအကွယ်မဲ့လိင်ကိစ္စအပြုအမူတွေအဖြစ်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်စေခြင်းငှါထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ Pokhara Sub-တဲ့ Metropolitan City, အဆင့်မြင့်အလယ်တန်းကျောင်းတွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများတို့တွင်အိမ်မထောင်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့ပဲ။
နည်းလမ်းများ: ဤသည်မှာစစ်တမ်းတစ်ခုအဖွဲ့အစည်း-based ဖော်ပြရန် Cross-Section လေ့လာမှုတစ်ခုဒီဇိုင်းကိုချမှတ်ခဲ့သေးသည်။ စာအိတ်ထဲမှာချိတ်ပိတ်တစ်ဦး Pre-စမ်းသပ်ပြီးစနစ်တကျမေးခွန်းလွှာအားလုံးဖှ 522 ပိုမိုမြင့်မားအလယ်တန်းကျောင်းဆယ်ကျော်သက်ကျောင်းသားများအကြားဖြန့်ဝေခဲ့သည်။
ရလဒ်များ: နီးပါးနှစ်ဆယ်ငါးရာခိုင်နှုန်း (24.6%) လေ့လာမှုဖြေဆိုသူအိမ်မထောင်မီလိင်ရှိခဲ့တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဆွေးနွေးတင်ပြကြသောဖြေဆိုသူမဟုတ်ခဲ့သောသူထက်အိမ်မထောင်မီလိင်ဆက်ဆံတဲ့ 2.62-ခြံမြင့်မားအခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ အထီးဖြေဆိုသူအမျိုးသမီးထက်အိမ်မထောင်မီလိင်ရှိသည်ဖို့ကပိုဖွယ်ရှိရှစ်ခေါက်ခဲ့ကြသည်။ ထိတွေ့နေသောဖြေဆိုသူ ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း အိမ်မထောင်မီလိင်ဆက်ဆံတဲ့ကိုးခြံပိုမိုမြင့်မားဖြစ်နိုင်ခြေကဖော်ပြခဲ့သည်။ လေ့လာမှုဖြေဆိုသူလည်းမလုံခြုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ရကြ၏ ဥပမာအားဖြင့်, အထီးဖြေဆိုသူ 13.4% အမျိုးသမီးလိင်လုပ်သားများနှင့်အတူလိင်ရှိခဲ့ပါတယ်။
နိဂုံး: အိမ်မထောင်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကျောင်းကမြီးကောင်ပေါက် ပတ်သက်. deleterious လူမှုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တန်ဖိုးများကိုနေသော်လည်းလက်မထပ်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပိုမိုပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြသည်။ ရွယ်တူချင်းအုပ်စုများသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေများကိုမကြာခဏမလုံလောက်ခြင်းနှင့်တိဖြစ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်များ၏အဓိကရင်းမြစ်များဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာမြီးကောင်ပေါက်မှန်ကန်သောနှင့်သင့်လျော်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးပွားမှုသတင်းအချက်အလက်များမရကြောင်းသေချာစေရန်သင့်လျော်ခြင်းနှင့်ထိရောက်သောဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဒီဇိုင်းရန်အရေးကြီးပါသည်။